R.D. Kôngô: Resadresaka Niarahana Tamin’ny Bilaogera Tony Katombe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Desambra 2017 16:34 GMT
Bilaogera avy ao amin'ny R.D. Kôngô i Anthony Mica Katombe (Hafohezina ho Tony) izay ”handray 39 taona amin'ny 13 Aprily”. Manana maripahaizana momba ny teny Anglisy sy ny Fandalinana ny Kolontsaina Afrikana avy aminà Anjerimanontolo Kôngôley izy. Azy Le Blog du Congolais ary miara-mamoaka lahatsoratra ao amin'ny Le Prince du Fleuve Congo, bilaogim-bondrona iray, izy. Ny marain'ny resakay tamin'ny messenger, voahodidinà lehilahy mitam-basy ny tanàna niaviany tao Kinshasa. Ary nitsidika mivantana i Kofi Annan mba hijery ny fizotry ny fifidianana henjana. Oay, ary namarana ny resakay tamin'ny messenger ny fahatapahan'ny jiro nandritra ny fotoana fohy. Kanefa mbola nanohy izahay — Tamin'ny teny frantsay netim-paharazan'i Tony.
AB: Mavitribitrika ao amin'ny tontolon'ny bilaogin'ny R.D. Kôngô ireo mpikambana re feo matetika anatinà antoko pôlitika. Ohatra, manana ny bilaoginy voafahana matetika ny sampana Belza anatin'ny antoko mpanohitra UDPS, UDPS Liege. Anatinà antoko pôlitika ve ianao?
TK: Tsia ary antony roa no mahatonga izany. Ny voalohany, tiako ny mitazona ny fahalalahako maneho hevitra ary tsy mieritreritra ny hiady varotra momba izany aminà antoko aho. Mifototra amin'ny maha izy azy ny mpitarika na amin'ny foko niaviany ny antoko amin'izao fotoana izao… fa tsy amin'ny fotokevitra. Mody milaza fa liberaly vaovao na sosialista fotsiny izy ireo noho ny sehoseho. Faharoa, avy amin'ny elatra havanana aho, liberaly vaovao. Kanefa ao Kôngô, mpomba an'i Mobutu daholo ny antoko liberaly vaovao rehetra. Vitanao ve ny mieritreritra ny tenanao ho mpomba an'i Mobutu? Amin'izao aloha, te ho akaiky an'ireo miady ho an'ny fahafahana aho, mampiasa ny bilaogiko mba handimbiasana ny tolon'ny UDPS aho indraindray noho izany. Heveriko fa tsara ry zareo, olona matotra. Saingy sôsialista izy ireo, ary izaho kosa liberaly.
AB: Inona no nahatonga anao nanomboka nanoratra bilaogy?
TK: Nanomboka nanoratra bilaogy aho tamin'ny Aogositra 2005 taorian'ny nitsidihako ny Renouveau Congolais, bilaogy [RDC] iray nosoratan'i Etienne Ngandu. Nieritreritra aho fa amin'ny alàlan'ny bilaogy, afaka hanohy hampita ny fandalinako izay efa navoakako an-tsoratra tanatin'ny gazety antsoina hoe Le Phare aho, saingy hisy mpamaky betsaka kokoa. Azoko lazaina fa mora hidirana kokoa ho an'ireo mpamaky eran-tany ny bilaogiko raha toa ka mijanona ho mora hidirana aty an-toerana kosa ny Le Phare, satria mahalana izy ireo vao manavao ny vohikalany.
AB: Iza no mamaky ny bilaoginao?
TK: Indrindra ireo Kôngôley avy any ivelany.
AB: Ahoana ny fitiavanao manoratra bilaogy hatreto?
TK: Tena sady mampientanentana no sady sarotsarotiny izany. Matetika mahazo antso na mailaka avy amin'olona maniry ny hahafantatra ny zavatra rehetra momba ny firenena aho. Manery ahy hanaraka vaovao tsy an-kiato 24/7 amin'ny fotoana izay tsy itsaharan'ny fivoaran-javatra izany. Fanamby izany ary izay no tiako.
AB: Anisan'ny mavitrika indrindra ao amin'i Afrika miteny Frantsay ny tontolon'ny bilaogin'ny R.D. Kôngô. Nahoana raha ny hevitrao?
TK: Mahafantatra bebe kokoa ny andraikiny manoloana ny manjo ny firenena ireo Kôngôley. Mihamaro ny olona henoko milaza fa tsy ho toy izao isika raha tsy misy fandraisana anjara avy amintsika izany. Noho izany dia miezaka ny maneho ny heviny ny rehetra, manintona ny zavatra mba hamonjena ilay Kôngô. Ary satria mbola tsy azo antoka ny fahalalahana maneho hevitra, mitsambikina ao amin'ny aterineto ny rehetra ho fandraisana anjara fotsiny. Ary nahoana izahay no be feo kokoa noho ireo Afrikana hafa miteny frantsay? Ny marina, misy fijaliana bebe kokoa noho ny any Gabon na ny any amin'i Kôngô iray hafa aty. Aty, afaka miaina 10 taona tsy mandray karama ny olona. Ary rehefa mba mahazo karama izy, mety ho kely be toy ny 10$ isam-bolana izany. Noho izany izay marary indrindra no mikiaka mafy indrindra.
AB: Inona no iraka sahanin'ny bilaoginao?
TK: Manadihady ny vaovao sy ny raharaha pôlitika mba hitarihana ny zanaka ampielezana Kôngôley handray anjara anaty pôlitika.
AB: Nisy fotoana iray voafaritra ve teo amin'ny fiainanao mety nisy fiantraikany teo amin'ny fanapahankevitrao hanao ny zavatra ataonao?
TK: Eny, namolavola toetra mpikomy aho tamin'ny faha-17 taonako. Nodarohinà ankizy manan-karena vitsivitsy ny namako (Fabius Kalongo) satria nisisika ny handro ao anatin'ny renirano mialoha an-dry zareo. Tany aminà faritra ambanivohitra izany ary araka ny fomba fanao dia izay tonga voalohany no mandro voalohany rehefa fandroana no resaka. Nisisika ny tsy hanaraka ilay fomba fanao ireo zaza manan-karena ireo ka kely sisa no tsy nahafaka ny ainy noho ny daroka nahazo azy. Rehefa nahita ity tany am-pianarana izahay, nanapa-kevitra ny hanomboka fanangonambola aho satria tsy nanana fianakaviana izy taty akaiky taty. Nankany amin'ny tobim-pahasalamana izahay mba hamangy azy kanjo, akory ny hagaganay fa voafonja izy. Nanantona ilay lehiben'ny mpitandro filaminana izahay ary nangakana ny hamindrana azy any amin'ny tobim-pahasalamana kanefa rehefa nandà izy dia nandrahona ny hamaky ny varavarankelin'ny tobin'ny mpitandro filaminana izahay. Navotsotra ilay namanay fa voaroaka tany an-tsekoly kosa aho. Hitanao, nisy nanendry diso ahy ho toy ny sefo. Nomba azy ireo ny raiko, izay lehibebe ihany koa tao an-tanàna, ka nanohitra ahy. Naharay anatra aho fa mety hampidi-doza ny fahefana ary nanapa-kevitra aho ny hanabaribary ny frandriny. Dia izay!